रुसमा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलमा फ्रान्स ४-२ ले बिजयी भएको छ । लुजिनिकी रंगशालामा भएको दुई युरोपियन राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा फ्रान्स बिजयी भएको हो । दुवै टोली विश्वकपको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदानमा कडा रुपमा उत्रिएका थिए । आजको खेलले विश्व फुटबलमा फ्रान्सलाइ दोश्रो च्याम्पियन राष्ट्र बनाएको छ । उसले घरेलु मैदानमा सन् १९९८ मा पहिलो विश्वकप जितेको थियो । खेलको पहिलो हाफको १८ औं मिनेटमा मारियो मान्जुकिजले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रान्सले अग्रता लिएको थियो ।
खेलको २८ औँ मिनेटमा क्रोएशियाका इभान फेरिससले गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए । तर खेलको ३८ औं मिनेटमा कर्नर सुटमा ह्यान्ड हुँदा भीएआर रिभ्यूमा पेनाल्टी पाएपछि एन्टोनिक ग्रिजम्यानले गोल गरेका थिए । खेलको पहिलो हाफ २-१ मा सकिएको थियो । खेलको दोश्रो हाफमा दुवै टिम आक्रामक खेलेका थिए । खेलको ५९ औँ मिनेटमा फ्रान्सका पोउल पोग्वाले गोल गरेका थिए भने ६५ औं मिनेटमा केलियन एमबाप्पेले गोल गरेका थिए । फ्रान्सका गोलकिपर हृयुगो लोरिसले बल क्लियर गर्न नसक्दा क्रोएशियाका मारियो मान्जुकिजले बल नियन्त्रणमा लिई खेलको ६९ औँ मिनेटमा गोल गर्न सफल भएका थिए । क्रोएशियाले कयौ आक्रामक अवसर गुमाएको थियो भने फ्रान्स समेत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसपछि भने दुवै टिमबाट कुनै गोल हुन् सकेन ।
फिफाको वरियता क्रममा ७ औं स्थानमा रहेको फ्रान्सले २० औं स्थानमा रहेको क्रोएशियाभन्दा आफु बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । यता बलिया टोलीलाई पाखा लगाउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको क्रोएशियाले पनि आफू उपाधिको वास्तविक हकदार बताएको थियो । फ्रान्सले सेमिफाइनलमा बेल्जियमलाई हराएर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । क्रोएशियाले इंग्ल्यान्डलाई हराएर फाइनल पुगेको थियो ।
साउनमा ब्रतः किन बस्ने ? यसका फाईदा र बेफाईदा कस्ता छन ?
विश्वमा घट्दै गएको इन्टरनेट र टेलिफोन शुल्क नेपालमा बढ्दो
आजको पत्रिकामा स्वास्थ्य समाचारः विदेशमा पढेका ८८ प्रतिशत डाक्टर फेल देखी लिएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेलेरै पारित गर्ने सरकारको तयारी
पानी जहाज चलाउन आवश्यक तयारी तिब्र
सांसद पद निलम्बनका माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट